Nhau - Kudhinda kwematehwe nei vanhu vazhinji vachisarudza UV flatbed printa
Kudhinda kwematehwe chiitiko chinowanzoitwa UV flatbed printa.Nekuvandudzwa kwenzanga uye shanduko mune aesthetics, fashoni pfungwa yevanhu iri kuramba ichichinja, uye kudiwa nerudo rweganda zvakasarudzika zvigadzirwa zvekudhinda zviri kukurawo Nekuvandudzwa kweinkjet kudhinda. tekinoroji, kudhinda kweganda haisisiri dambudziko.Iyo chaiyo chaiyo, yekumhanyisa UV flatbed printer, inokwana kusangana nezvinodiwa zvekushandisirwa kwakadaro.
Zvakajairika zvematehwe marudzi ePVC dehwe, mombe yeganda, nyoro dehwe, chakagadzirwa nedehwe, PU yeganda.Muchirongwa chekugadzira uchishandisa UV purinda kupurinda dehwe, inoenderana inki inofanirwa kusarudzwa zvinoenderana neyakareruka uye yakaoma degree reganda zvinhu. , yakapfava inki inowanzo shandiswa zvakapfava zvigadzirwa zveganda kusangana nezvinodiwa zvekuchinja. Kune zvakaoma zvigadzirwa zveganda, ingi yakaoma inowanzo shandiswa kuwedzera kusakara kusagadzikana kwepamusoro. Ehezve, rimwe dehwe rinoshandisa kwazvakarerekera ingi.
Tsika yekudhinda muindasitiri yeganda ndeyekudhinda skrini kwete UV kudhinda, asi skrini yekudhinda kazhinji ine vara rimwe chete, iyo shanduko vara haisi yechisikigo.Large dehwe rekudhinda muchina michina inodhura, yakakwira zvinodiwa kune yeganda zvinhu pachayo. ichaparadza dehwe rezvinhu, iyo yeganda pamusoro zvivakwa inokonzeresa akasiyana madhigirii ekukuvara.UV flatbed mapurinda kugadzirisa matambudziko ari pamusoro, zvichiita dehwe kudhinda kuti zvive nyore uye kuratidza maererano nehunhu.
Iko kubuda kweiyo UV inodhinda yekudhinda dehwe kunopa diki batch remagadzirirwo ekudhinda indasitiri mhinduro, nekukurumidza kupindura kune zvinodiwa nevatengi, isina ndiro kuti ipfupise kutenderera kutenderera, pamwe nehunhu hwechinyorwa chekudhinda pateni shanduko inogona kusimbisa hunhu. zvinodikanwa zvenguva nyowani, iyo UV yakati sandara-mapaneru mapurinda mumatehwe ekudhinda musika ine hombe musika nzvimbo.